စင်ကာပူရဲ့ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ (အမိန့်တွေ အများကြီး မထုတ်ပါဘူးတဲ့) - Zet Star
စင်ကာပူရဲ့ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ (အမိန့်တွေ အများကြီး မထုတ်ပါဘူးတဲ့)
ကိုဗစ်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာမှာ စင်ကာပူ ရဲ့ Circuit Breaker ၂ လက အရမ်းကို ထိရောက်တယ်။ အလုပ်သမားဆောင်တွေကနေ ကူးဆက်တာက လူထုကြားထဲကို ရောက်မလာဘူး။ ဒီနေ့ဆို ဒေသတွင်း မှာ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အစိုးရ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်လဲ ဆိုရင်….
(၁) အိမ်ထောင်စု တစ်စုနဲ့ တစ်စု အလည်သွားလို့မရဘူး။ မိဘဆီလဲ သွားလည်လို့ မရသလို သမီးရည်းစားတွေလဲ တွေ့ခွင့်မပေးဘူး။
(၂) ဆိုင်မှာ ထိုင်စားခွင့် မရှိဘူး။ အကုန် ပါဆယ်ထုပ်ရတယ်။ တန်းစီရင် ၃ ပေအကွာ ထားပြီး တန်းစီရတယ်။ ခပ်ခွာခွာနေဖို့ သတိပေးမယ့်လူတွေကို အဓိက လူများတဲ့ စျေးတွေ အမ်အာတီ တွေ ကျောင်းတွေမှာ ထားထားတယ်။ အချိန်တိုင်း ခပ်ခွါခွါနေဖို့ အော်နေတာပဲ။
(၃) လူတိုင်း Mask တပ်ရတယ်။ မတပ်ရင် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၃၀၀. ဒီနေရာမှာ Mask မတပ်ရင် ပြည်သူတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တိုင်လို့ရတယ်။
(၅) Stay Home ထိတဲ့သူတွေကို လူ့စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက ရုတ်တရက် စစ်ဆေးမှုတွေ ဗီဒီယိုကောလ်တွေလုပ်တယ်။ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ရင် အရေးယူတယ်။ နေထိုင်ခွင့် ရုတ်သိမ်း ခံရတာတွေ ရှိတယ်။ ပီအာ တွေ ပြန်သိမ်းခံရတဲ့အထိ အရေးယူခံရတယ်။ Stay Home ဆိုတာ အိမ်ပေါ်ကနေ အိမ်အောက်တောင် ဆင်းလို့မရပါ။
(၆) စျေးတွေမှာ အဝင်နဲ့ အထွက် လူဦးရေ ကန့်သတ်လိုက်တယ်။
(၇) မရှိမဖြစ် မဟုတ်တဲ့ ရုံးတွေ အကုန်ပိတ်တယ်။ အိမ်က လုပ်လို့ရသလောက် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းတယ်။ ခိုးဖွင့်တဲ့ ရုံးတွေရှိလို့ လူ့စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက မိရင်တော့ ရုံးပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိ အရေးယူတယ်။
ဒါက ကိုယ်နားလည်သလောက် စင်ကာပူ အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ် ကိုင်တွယ်ပုံပါ။ ခုထိလဲ လူ ၅ ယောက်ထက် စုမရဘူး။ ပါတီ တွေ စုဝေးပွဲ တွေ ပေးမလုပ်ဘူး။ ကလပ် တွေ မဖွင့်ရဘူး။ လူတိုင်း Mask တပ်ရတယ်။ Social Distancing ရှိရတယ်။ အပူချိန် တိုင်းရတယ်။ တစ်နေရာသွားတိုင်း တစ်ခါ Check in Check out လုပ်ရတယ် (contact tracing) အတွက်။
မြန်မာပြည်သူတွေလဲ အစိုးရကို ကူညီသောအားဖြင့် နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးကြပါလို့..
← မိုးထဲရေထဲ ကျရင် အမေရိကန်ဟာ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ရော ကူညီမှာလား?
စျေးဝယ်ရုံနဲ့ ကိုဗစ်ကူးနိုင်သလား? အပြင်ထွက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဆံပင်၊ ဖိနပ်တွေပေါ်မှာ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သလား? →